हाम्रो श्वास फेर्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ – Online Bichar
Online Bichar 24th December, 2017, Sunday 5:50 AM
प्रा. डा. भगवान कोइराला वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ हुन् । गंगालाल ह्दयरोग केन्द्र र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका डा. कोइराला सरकारद्वारा गठित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष पनि थिए । डा. कोइराला अहिले मनमोहन कार्डियोथेरासी एन्ड भास्कुलर सेन्टरमा कार्डियो थेरासिस एन्ड भास्कुलर सर्जन विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । कोइरालासँग नेपालमा मुटुरोग, यसको अवस्था, उपचार पद्धतिलगायतका विषयमा गरेको संवाद
प्रमुख कारण त मानिसको अस्वस्थ जीवनशैली नै हो । त्यसबाहेक ह्दयाघात गराउने सम्भावना जेनेटिक पनि हुन्छ । बाबुबाजेदेखि नै जिनमा खराबी छ भने सम्भावना बढी हुने नै भयो । त्यसैगरी मधुमेह, कोलेस्ट्रोल बढ्ने समस्या पनि प्रायस् जेनेटिक नै हो, जसले चाँडै ह्दयाघात गराउन सक्छ । धूम्रपान तथा अल्कोहल सेवन गर्ने युवाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको धूवाँ–धूलो पनि ह्दयाघातको एउटा कारण हो । यी सबै कारणले ह्दयाघातको सम्भावना बढ्दै गएको हो । युवामा हुने ह्दयाघात अस्वस्थ जीवनशैलीसँग बढी जोडिएको छ ।
मानिसको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरा केही होइन । जनता स्वस्थ भए भने मात्र राष्ट्र सबल हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म सुधारको खाँचो छ र सबैले आ–आफ्नो तह र तप्काबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले स्थानीय सरकार गठन भैसकेको छ । स्थानीय तहले मानिसलाई रोगका बारेमा सचेतना जगाउनुपर्छ, व्यायाम गर्ने, दौडने जस्ता स्थानहरू उपलब्ध गराउने, पैदल यात्रुलाई हिँड्ने वातावरण बनाउने, सवारी साधनको प्रदूषण मापनलाई नियमित गराउनेजस्ता काम गर्नुपर्छ । धूवाँ–धूलो नियनत्रण गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसमा धेरै ठूलो काम गर्नै पर्दैन, धूलोको समस्या समाधानका लागि नियमित पानी छर्कि्दिँदा हुन्छ भने सडक बढाउँदा सानो पेटी पनि निर्माण गर्नुपर्छ । यी समुदाय र स्थानीय स्तरमा गरिने काम हुन् ।
राष्ट्रिय तहमा नसर्ने रोग रोकथामका लागि कतिपय नीति छन्, कतिपय बन्ने प्रक्रियामा छन् र केही छलफलको प्रक्रियामा छन् । केही लागू पनि भएका छन् । मुटुको कुरा गर्ने हो भने नसर्ने रोगको कुरालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । धूम्रपानमा कडाइ गर्नुपर्छ । हामीसँग सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन छ, तर त्यहाँ तोकिएको मापदण्डअनुसार काम हुँदैन । एउटा चुरोटले खानेलाई मात्र नभएर सँगै भएको मानिस र परिवारका सबै सदस्यलाई असर गर्छ । ऐन–नियम बनाएर हल्लाखल्ला गर्ने तर त्यसलाई लागू नगर्ने परिपाटी हामीकहाँ छ । खास कुरा त नियम बनाएपछि त्यसलाई कार्वान्वयन गर्नुपर्ने हो । राष्ट्रिय स्तरबाटै मदिरा नियन्त्रणको पहल गर्नुपर्छ । मुटुको बाथको प्रमुख कारणका रूपमा रहेको टन्सिल बिग्रन नदिन सरकारले सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै बेलैमा त्यसको उपचार गरिनुपर्छ । विगतमा बाथमुटु रोगको सम्भावना भएका र भैसकेका बिरामीलाइ दिइँदै आएको पेनिसिलिन औषधी अहिले दिन छोडिएको छ । त्यो कार्यक्रम तत्काल पुनस् सुचारु गर्नुपर्छ, जसले गर्दा बालबालिकाको मुटुको भल्व फेर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुग्न पर्दैन ।
आयोडिनको कमीका कारण गलगाँडहरू भएकाहरूका लागि सरकारले त्यसको प्रवद्र्धन गरेको हो, तर त्यसको अर्थ धेरै खाऊ भनेको होइन, थोरै खाए पनि पुग्छ । राष्ट्रिय रूपमा गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्, हामीले फोकस गर्नुपर्ने कुरा भने यिनै हुन् । त्यसपछि पनि बिरामी भएकाहरूको भल्व फेर्न, मुटुको उपचार निस्शुल्क गरिदिएको छ, यो सरकारले राम्रो गरेको हो । यसले समाजमा राम्रै प्रभाव पारिरहेको छ, बालबालिकाहरूलाई लामो समय बाँच्न सहयोग गरिरहेको छ । भल्व निस्शुल्क फेर्न पाइने भएकाले गरिबहरूले सानैमा उपचार पाउँदा खुसी र स्वस्थ जीवन जिउन पाउँछन् । सानै उमेरमा बढी गरिबलाई लाग्ने रोगहरूमा र लामो समयसम्म स्वस्थ राख्न सकिने उपचारमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि न्यायोचित व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सामान्यतस् एक घण्टा गर्दा राम्रो हुन्छ, तर यति नै गर्नुपर्छ भन्ने फुर्मला छैन । मुटु स्वास्थ्यका हिसाबले हप्तामा कम्तीमा चार दिन ३० देखि ४५ मिनेट ‘ब्रिस्ट वाकिङ’ गर्नुपर्छ । त्यसले मुटुलाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ । फिटनेसका लागि म त दैनिक एक घण्टा ब्याडमिन्टन खेल्छु, तर त्यो आफ्नो क्षमता र समयअनुसार हो, योचाहिँ स्वस्थ रहनका लागि । मुटुरोगीहरूले चिकित्सकको सल्लाहअनुसार कति हदसम्मको व्यायाम कति मिनेटसम्म गर्न मिल्छ ? त्यो सल्लाहरपरामर्श लिएर त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ, तर जस्तोसुकै मुटुरोग भएकालाई पनि हामीहरूले केही न केही व्यायाम गर्न नापेररजाँचेर सल्लाह दिन्छौं ।
कि चिकित्सकहरूले दिएको सल्लाह पछ्याउनुपर्‍यो, कि त आफैंमा बुद्धि आउनुपर्‍यो । आफ्नो बुद्धि पनि आउँदैन, चिकित्सकले भनेको पनि मान्दैन, कुरा काटेको काट्यै छ, आफ्नो स्वास्थ्य पनि बिगारेको छ र राष्ट्रिय सम्पत्ति पनि सिध्याएको छ । अझ सरकारले निस्शुल्क गरेन भनेर सरकारलाई गाली पनि गर्‍या छ । आफूचाहिँ लापरवाही गर्ने अनि दोष अर्कोलाई लगाउने, नागरिक जिम्मेवार हुन नपर्ने ?